डु take्गा लिने हिम्मत - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
लेख > प्रवचन > डुङ्गा लिनुहोस्
येशू को एक प्रसिद्ध दृष्टान्त: दुई मानिसहरु प्रार्थना गर्न को लागी मन्दिर मा जान्छन्। एउटा फरिसी हो, अर्को कर उठाउने (लूका १::,, १४)। आज, येशूले यो दृष्टान्त भन्नुभएको दुई हजार बर्ष पछि, हामी जानबूझेर टाउको हल्लाउन सक्छौं र भन्न सक्छौं: "निश्चय नै, फरिसीहरु, आत्म-धार्मिकता र कपट को प्रतीक!" ठिक छ ... तर हामी यो मूल्याङ्कनलाई छाडौं र दृष्टान्तले येशूका श्रोताहरूलाई कस्तो असर गर्‍यो भनेर कल्पना गर्ने प्रयास गरौं। एकातिर: फरिसीहरूलाई कट्टर पाखण्डी मानिएको थिएन जुन हामी, 18,9.14 वर्षको चर्चको इतिहास भएका इसाईहरूले उनीहरूलाई लिन चाहन्छौं। बरु, फरिसीहरु यहूदीहरु को धर्मी, जोसिलो, भक्त धार्मिक अल्पसंख्यक थिए जसले बहादुरी संग उदारवाद, समझौता र रोमन संसार को मूर्तिपूजक ग्रीक संस्कृति संग sycretism को बढ्दो ज्वार को विरोध गरे। उनीहरुले मानिसहरुलाई कानून मा फर्कन को लागी आह्वान गरे र आज्ञाकारिता मा विश्वास को दृढता को लागी आफु प्रतिबद्ध।
जब फरिसीले यस दृष्टान्तमा प्रार्थना गर्दछन्: "भगवान, धन्यबाद कि म अन्य व्यक्तिहरू जस्तो छैनँ", यो अति आत्मविश्वास होइन, खाली ठट्टा होइन। यो सत्य थियो। कानूनप्रति उनको आदर दोषरहित थियो; उनले र फरिसी अल्पसंख्यकले कानूनमा द्रुत गतिमा वाचा बाँधेका थिए जुन विश्वमा कानूनले चाँडै महत्व गइरहेको छ। ऊ अरू मानिसहरु जस्तो थिएन, र ऊ आफैंले आफैंलाई पनि त्यसमा भरोसा गर्दैन - ऊ त्यस्तो भएकोमा भगवानलाई धन्यवाद दिन्छ।
अर्कोतर्फ: भन्सार अधिकारीहरू, प्यालेस्टाइनमा कर सङ्कलन गर्नेहरू, सबैभन्दा खराब सम्भावित प्रतिष्ठा थियो - तिनीहरू यहूदीहरू थिए जसले रोमन कब्जा गर्ने शक्तिको लागि आफ्नै मानिसहरूबाट कर उठाउँछन् र जसले प्रायः बेईमान तरिकाले आफूलाई समृद्ध बनाउँथे (मत्ती 5,46 तुलना गर्नुहोस्। )। भूमिकाहरूको विभाजन येशूका दर्शकहरूलाई तुरुन्तै स्पष्ट हुनेछ: फरिसी, परमेश्वरको मानिस, "असल" को रूपमा र कर उठाउने, पुरातन खलनायक, "खराब" को रूपमा।
सधैं जस्तै, येशू आफ्नो दृष्टान्त मा एक धेरै अप्रत्याशित कथन बनाउनुहुन्छ: हामी के छौं वा के गर्न को लागी भगवान मा कुनै सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव छैन; उहाँले सबैलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, सबैभन्दा खराब पापीलाई पनि। हामी सबैले उहाँलाई भरोसा गर्नु पर्छ। र मात्र चकित पार्ने को रूप मा: जो कोहि पनी विश्वास गर्दछ कि ऊ अरु भन्दा धर्मी छ (भले पनि उनी यसको ठोस प्रमाण हुन सक्छ) अझै पनी उसको पाप मा छ, भगवानले उसलाई माफ गरेको कारणले होइन, तर उसले त्यो प्राप्त गर्दैन जो उसलाई आवश्यक छैन। विश्वास गर्न।
पापीहरूको लागि शुभ समाचार: सुसमाचार पापीहरूको लागि हो, धर्मी होइन। धर्मीहरूले सुसमाचारको वास्तविक सार बुझ्न सक्दैन किनकि उनीहरूलाई लाग्छ कि यस प्रकारको सुसमाचार आवश्यक छैन। सुसमाचार धर्मीहरूलाई खुशीको खबर जस्तो देखिन्छ कि परमेश्वर आफ्नो पक्षमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा उनको विश्वास ठूलो छ किनकि उसलाई थाहा छ कि उहाँ आफू वरिपरिको स्पष्ट पापीहरू भन्दा बढी डराउनुहुन्छ। धारिलो जिब्रोले उसले अरूको भय sins्कर पापहरूको निन्दा गर्दछ र परमेश्वरसँग नजिक हुन पाएकोमा र उसले सडकमा र समाचारमा देखेको व्यभिचारी, हत्यारा र चोरको जस्तो जीवन बिताउन पाउँदैन। धर्मीहरूको लागि, सुसमाचार संसारका पापीहरू विरूद्ध एक कडा हडताल हो, पापीले पाप गर्न छोड्नुपर्दछ र ऊ धर्मीहरू जस्तै बाँचिरहनु पर्छ भन्ने चर्को सम्झना हो।
तर त्यो सुसमाचार होइन। सुसमाचार पापीहरु को लागी सुसमाचार हो। यसले बताउँछ कि भगवानले पहिले नै उनीहरुका पापहरु क्षमा गर्नुभएको छ र उनीहरुलाई येशू ख्रीष्टमा नयाँ जीवन दिनुभएको छ। यो एक सन्देश हो कि पापीहरुलाई पाप को क्रूर अत्याचार बाट थकित बनाएर बस्न र नोटिस लिन्छ। यसको मतलब यो हो कि भगवान, धार्मिकता को भगवान, जो उनीहरु लाई उनीहरु को बिरूद्ध सोचेका थिए (किनकि उहाँसँग हुन को लागी हरेक कारण छ), वास्तव मा उनीहरुको लागी हो र उनीहरुलाई माया पनि गर्दछ। यसको मतलब यो हो कि परमेश्वरले तिनीहरूका पापहरू तिनीहरूमा श्रेय दिनुहुन्न, तर पापहरू येशू ख्रीष्टद्वारा प्रायश्चित भइसकेका छन्, पापीहरू पहिले नै पापको गलाबाट मुक्त भइसकेका छन्। यसको मतलब यो हो कि उनीहरु अब एक दिन को लागी डर, शंका र अन्तस्करण को संकट मा बाँच्न को लागी छैन। यसको मतलब तिनीहरूले यस तथ्यमा निर्माण गर्न सक्छन् कि येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरले उनीहरूका लागि प्रतिज्ञा गर्नुभएको सबै कुरा हो - क्षमा गर्ने, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, अधिवक्ता, संरक्षक, मित्र।
धर्म भन्दा बढी
येशू ख्रीष्ट धेरै मध्ये एक मात्र धार्मिक उपकारकर्ता हुनुहुन्न। उहाँ महान संग नीलो आँखा कमजोर छैन, तर अन्ततः मानव दया को शक्ति को अनौपचारिक विचारहरु। उहाँ धेरै मानिसहरु मा नैतिक शिक्षक पनि हुनुहुन्न जसले मानिसहरुलाई "प्रयास गर्न को लागी", नैतिक उन्नति र अधिक सामाजिक उत्तरदायित्व को लागी आह्वान गर्नुभयो। होइन, जब हामी येशू ख्रीष्टको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी सबै चीजहरुको अनन्त स्रोत (हिब्रू १: २-३) को बारेमा बोल्दैछौं, र त्यो भन्दा बढि: उहाँ मुक्तिदाता, शुद्धिकरणकर्ता, संसारको लागि मेलमिलापकर्ता हुनुहुन्छ, जसको माध्यमबाट उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थानले सम्पूर्ण विक्षिप्त ब्रह्माण्डलाई परमेश्वरसँग मेलमिलाप गराएको छ (कलस्सी १:२०)। येशू ख्रीष्ट एक हुनुहुन्छ जसले सबै थोक अस्तित्वमा सृष्टि गर्नुभयो, जसले हरेक पल मा अस्तित्वमा रहेका सबै चीजहरु बोक्नु हुन्छ र जसले तपाइँ र म सहित सबै थोक अस्तित्वमा छुटकारा पाउन को लागी सबै पापहरु लिनुभयो। उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको कुरा बनाउन उहाँ हामीमध्ये एकको रूपमा आउनुभयो।
येशू धेरै मा एक मात्र धार्मिक उपकारकर्ता हुनुहुन्न र सुसमाचार धेरैको बीचमा मात्र एक पवित्र पुस्तक होइन। सुसमाचार कुनै नयाँ र सुधारिएको नियम, सूत्र र दिशानिर्देशहरू होइन जुन हाम्रो लागि चिडचिडा, खराब स्वभावको माथिल्लो प्राणीमा राम्रो मौसम बनाउनको लागि हो। यो धर्म को अन्त्य हो। "धर्म" नराम्रो समाचार हो: यसले हामीलाई बताउँछ कि देवताहरू (वा भगवान) हामीसँग अत्यन्तै रिसाउँछन् र केवल नियमहरूसँग कडा अनुपालन गरेर आफूलाई खुसी पार्न अनुमति दिन्छन् र त्यसपछि हामीलाई फेरि मुस्कुराउँछन्। तर सुसमाचार "धर्म" होइन: यो भगवान को मानवता को लागी धेरै राम्रो खबर हो। यसले सबै पापहरू क्षमा गर्न र प्रत्येक पुरुष, महिला र बच्चालाई परमेश्वरको मित्र हुन घोषणा गर्दछ। यसले मेलमिलापको एक अविश्वसनीय रूपले ठुलो, बिना शर्त प्रस्ताव गर्दछ, unreservedly विश्वास गर्न र यसलाई स्वीकार गर्न को लागी पर्याप्त चतुर छ जो प्रत्येक व्यक्ति को लागी जोडिएको छ (१ जॉन २: २)।
"तर जीवनमा नि: शुल्क को लागी केहि छैन," तपाई भन्नुहुन्छ। यस अवस्थामा त्यहाँ निःशुल्क केहि छ। यो सबै कल्पना गर्न योग्य मध्येको सबैभन्दा ठूलो हो र यो अनन्त जीवन छ। यो प्राप्त गर्नका लागि केवल एउटा कुरा आवश्यक छ: दातालाई विश्वास गर्न।
भगवानले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ - हामीलाई होइन
भगवानले पापलाई केवल एक कारणले घृणा गर्नुहुन्छ - किनकि यसले हामीलाई र हाम्रो वरपरका सबै चीजलाई नाश गर्दछ। तपाईले देख्नु भयो कि भगवानले हामीलाई नष्ट गर्न सक्दैन किनभने हामी पापी छौं। हामीलाई नाश गर्ने पापबाट उसले हामीलाई उद्धार गर्न चाहन्छ। र सब भन्दा राम्रो कुरा हो - उसले यो गरिसकेको छ। येशू ख्रीष्टमा उसले यो गरिसकेको छ।
पाप खराब छ किनकि यसले हामीलाई भगवान बाट टाढा राख्छ। यसले मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग डराउँछ। यो हामीलाई यो के हो को लागी वास्तविकता हेर्न बाट राख्छ। यसले हाम्रो खुसीलाई विषाक्त बनाउँछ, हाम्रा प्राथमिकताहरुलाई बिगार्छ, र शान्ति, शान्ति, र सन्तुष्टिलाई अराजकता, डर र भयमा परिणत गर्दछ। यसले हामीलाई जीवनको निराशा बनाउँछ, यहाँ सम्म कि र विशेष गरी जब हामी विश्वास गर्छौं कि हामी चाहन्छौं र चाहिन्छ कि हामी वास्तवमा के प्राप्त गर्छौं र राख्दछौं। परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ किनभने यसले हामीलाई नाश गर्छ - तर उहाँले हामीलाई घृणा गर्नुहुन्न। उहाँले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। यसैले उहाँले पापको बिरुद्धमा केहि गर्नुभयो। उहाँले के गर्नुभयो: उहाँले तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो - उहाँले संसारको पापहरु हटाउनुभयो (यूहन्ना १: २)) - र उहाँले यो येशू ख्रीष्ट (१ तिमोथी २:)) को माध्यम बाट गर्नुभयो। पापी को रूप मा हाम्रो स्थिति को मतलब यो होइन कि भगवान हामीलाई चिसो काँध दिनुहुन्छ, जस्तै अक्सर सिकाईन्छ; यसको परिणाम यो छ कि हामी, पापीहरु को रूप मा, भगवान बाट टाढा भयौं, उहाँ बाट टाढा भयौं। तर उहाँ बिना हामी केहि छैनौं - हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्व, हामीलाई परिभाषित गर्ने सबै कुरा उहाँमा निर्भर गर्दछ। पाप एक दोधारी तरवार जस्तै काम गर्दछ: एकातिर, यसले हामीलाई डर र अविश्वास बाट भगवान को पछाडि फर्काउन बाध्य गर्दछ, उहाँको प्रेम लाई अस्वीकार गर्न को लागी; अर्कोतर्फ, यो हामीलाई ठीक यो माया को लागी भोको छोड्छ। (किशोरहरुको आमा बुबा यो विशेष गरी राम्रो संग सहानुभूति हुनेछ।)
ख्रीष्टमा पाप मुक्त गरियो
सायद तपाइँको बचपनमा तपाइँलाई वरपरका वयस्कहरु द्वारा यो विचार दिईएको थियो कि भगवान एक सख्त न्यायाधीश को रूप मा हामी मा सिंहासन मा हुनुहुन्छ, कि उहाँ हाम्रो हरेक काम को एक एक ध्यान मा तौल गर्नुहुन्छ, हामीलाई दण्ड दिन को लागी तयार छ यदि हामी सबै कुरा एक सय प्रतिशत सही छैन। र हामी स्वर्गको ढोका खोल्न सक्षम हुनुपर्छ भनेर। तर सुसमाचारले अब हामीलाई सुसमाचार दिन्छ कि भगवान बिल्कुल एक सख्त न्यायाधीश हुनुहुन्न: हामी आफैंलाई येशूको छविको लागी पूरै उन्मुख छ। येशू - बाइबल हामीलाई बताउँछ - हाम्रो मानव आँखा ("उहाँको अस्तित्व को छवि", हिब्रू १: ३) को लागी भगवान को सिद्ध छवि हो। उहाँमा उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, उहाँको संगति र किन छ, हामीलाई देखाउन उहाँमा परमेश्‍वरले "आफैलाई तल दिनुभयो", हामीमध्ये एकको रूपमा आउनुभयो; उहाँमा हामी परमेश्वरलाई चिन्छौं, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, र न्यायाधीशको पद उहाँको हातमा राखिएको छ।
हो, भगवानले येशूलाई सारा संसारको न्यायाधीश बनाउनुभयो, तर उहाँ मात्र एक कठोर न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँले पापीहरुलाई क्षमा दिनुहुन्छ; उहाँले "न्याय गर्नुहुन्छ", अर्थात्, तिनीहरूको निन्दा गर्दैनन् (यूहन्ना ३:१७)। उनीहरु मात्र शापित छन् यदि उनीहरु बाट माफी माग्ने इन्कार गरे (v। १))। यो न्यायाधीशले आफ्ना अभियुक्तहरूको सजाय आफ्नै खल्तीबाट तिर्छन् (१ यूहन्ना २:१-२), सबैको दोष सदाको लागि निभाएको घोषणा गर्छन् (कलस्सी १:१९-२०) र त्यसपछि विश्व इतिहासको सबैभन्दा ठूलो उत्सवमा सारा संसारलाई निम्तो दिन्छन्। । अब हामी विश्वास र अविश्वासको बारेमा अनन्त बहस गर्न बस्न सक्छौं र उहाँको कृपाबाट कसलाई समावेश गरिएको छ र को बाहिर छ। वा हामी यो सबै उहाँलाई छोड्न सक्छौं (यो त्यहाँ राम्रो हातमा छ), हामी उफ्रन र उनको उत्सव को लागी स्प्रिन्ट गर्न सक्छौं, र बाटोमा सबैलाई राम्रो समाचार फैलाउन र हाम्रो बाटो पार गर्ने सबैको लागी प्रार्थना गर्न सक्छौं।
सुसमाचार, शुभ समाचारले हामीलाई भन्दछ: तपाई पहिले नै ख्रीष्टको हुनुहुन्छ - यसलाई स्वीकार्नुहोस्। मजा लिनुहोस्। उहाँलाई आफ्नो जीवन संग विश्वास गर्नुहोस्। उसको शान्तिको आनन्द लिनुहोस्। तपाईंको आँखा संसारमा सुन्दरता, प्रेम, शान्ति, रमाइलोको लागि खुला गर्नुहोस् जुन केवल ख्रीष्टको प्रेममा विराजमान मानिसहरूले मात्र देख्न सक्छन्। ख्रीष्टमा हामीसँग पापीपनको सामना गर्ने र स्वीकार गर्ने स्वतन्त्रता छ। किनभने हामी उहाँमा विश्वास गर्छौं, हामी निर्भयतासाथ हाम्रा पापहरू स्वीकार गर्न सक्छौं र त्यसलाई आफ्नो काँधमा राख्न सक्छौं। उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ।
येशू भन्नुहुन्छ, “मकहाँ आओ, तिमीहरू सबै जो कष्टप्रद र बोझिलो छौ; म तिमीलाई ताजा गर्न चाहन्छु। मेरो जुवा आफ्नो हातमा लिनुहोस् र मबाट सिक्नुहोस्; किनकि म नम्र र नम्र हृदयमा छु। त्यसैले तपाइँ तपाइँको आत्माहरु को लागी आराम पाउनुहुनेछ। मेरो जुवा कोमल छ र मेरो बोझ हलुका छ (मत्ती ११: २-11,28-३०)।
जब हामी ख्रीष्ट मा विश्राम गर्छौं, हामी धार्मिकता मापन गर्न बाट अलग रहन्छौं; अब हामी हाम्रा पापहरू उहाँलाई धेरै स्पष्ट र इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्न सक्छौं। येशूको फरिसी र कर कलेक्टर (लूका १:: -18,9 -१४) को दृष्टान्त मा, यो पापी कर कलेक्टर हो जसले निश्चय नै आफ्नो पाप स्वीकार गर्दछ र परमेश्वरको अनुग्रह चाहन्छ जो धर्मी ठहरिन्छ। फरिसी - शुरू बाट नै धार्मिकता को लागी प्रतिबद्ध, लगभग ठीक आफ्नो पवित्र सफलताहरु को रेकर्ड राख्दै - उसको पापीपन र माफी र अनुग्रह को लागी उसको तीव्र आवश्यकता को लागी कुनै आँखा छैन; त्यसकारण उसले परमेश्वरबाट मात्र आउने धार्मिकता प्राप्त गर्दैन (रोमी १:१७; ३:२१; फिलिप्पी ३,९)। यो ठीक उसको "नियमहरु अनुसार पवित्र जीवन" हो कि उसको दृष्टिकोण लाई कती गहिरो ईश्वर को अनुग्रह को खाँचो छ को बारे मा उनको अस्पष्ट छ।
हाम्रो गहिरो पापीपन र अधर्मको बीचमा, ख्रीष्ट हामीलाई अनुग्रह संग भेट्न आउनुहुन्छ (रोमी ५: & र))। यहाँ, हाम्रो कालो अन्यायमा, धार्मिकताको सूर्य हाम्रो पखेटा मुक्ति संग हाम्रो लागी उदाउँछ (मल ३:२०)। जब हामीले आफ्नो वास्तविक आवश्यकतामा आफूलाई देख्छौं, दृष्टान्तमा ऋणी र कर उठाउनेले जस्तै, जब हाम्रो दैनिक प्रार्थना "परमेश्वर, ममाथि दया गर्नुहोस्, पापी" हुन सक्छ, तब मात्र हामीले राहतको सास फेर्न सक्छौं। येशूको निको पार्ने अंगालोको न्यानोपनमा।
हामीले परमेश्वरलाई प्रमाणित गर्न केहि छैन। उहाँ हामीलाई आफैले भन्दा राम्ररी चिन्नुहुन्छ उहाँ हाम्रो पापलाई जान्नुहुन्छ, उहाँ दयाको खाँचो जान्नुहुन्छ। उहाँसँग हाम्रो अनन्त मित्रता सुनिश्चित गर्न उसले हाम्रो लागि पहिले नै सबै काम गरिसक्यो। हामी उहाँको प्रेममा आराम गर्न सक्छौं। हामी उहाँसँग माफी मा विश्वास गर्न सक्छौं। हामी सिद्ध हुनुपर्दैन; हामीले केवल उहाँमा विश्वास गर्नुपर्दछ र उसलाई विश्वास गर्नुपर्दछ। परमेश्वर हामी उहाँको साथी बन्न चाहनुहुन्छ, उसको इलेक्ट्रोनिक खेलौना वा टिन सिपाही होइन। ऊ प्रेमको खोजीमा छ, शवप्रति आज्ञाकारी नभएर क्रियान्वित सामर्थ्यको।
विश्वास गर्नुहोस्, काम गर्दैन
राम्रो सम्बन्ध विश्वास, लचिलो बन्धन, वफादारी र सबै भन्दा माथि, प्रेममा आधारित हुन्छ। शुद्ध आज्ञाकारिता एक आधार को रूप मा पर्याप्त छैन (रोमी ३:२3,28; ४: १--4,1)। आज्ञाकारिता को आफ्नो स्थान छ, तर - हामीलाई थाहा हुनु पर्छ - यो सम्बन्ध को एक परिणाम हो, यसको कारणहरु मध्ये एक होइन। यदि कसैले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई केवल आज्ञाकारितामा आधारित गर्दछ भने, कोही या त दृष्टान्तमा फरिसी जस्तै घमण्डमा फस्छ वा डर र निराशामा फस्छ, पूर्णता मापदण्डमा पूर्णताको डिग्री पढ्दा कत्तिको इमानदार छ भन्ने आधारमा।
सीएस लुईसले क्रिस्चियनिटी पार एक्सिलेन्समा लेखेका छन् कि यदि तपाईंले कसैको सल्लाह लिनुहुन्न भने तपाईंले कसैलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन। भन्नुहोस्: जसले ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ उसले पनि उहाँको सल्लाह सुन्छ र आफ्नो क्षमताले यसलाई व्यवहारमा उतार्छ। तर जो कोहि ख्रीष्ट मा छ, जो उहाँ मा भरोसा राख्छ, उसले असफल भएमा खारेज हुने डर बिना उसको सबै भन्दा राम्रो गर्ने छ। यो हामी सबैलाई धेरै पटक हुन्छ (असफलता, मेरो मतलब)।
जब हामी ख्रीष्टमा आराम गर्छौं, हाम्रा पापी बानीहरु र मानसिकताहरु लाई पराजित गर्ने हाम्रो प्रयास भगवान को भरोसायोग्य क्षमा र मुक्ति मा निहित एक प्रतिबद्ध मानसिकता बन्छ। उहाँले हामीलाई पूर्णता को लागी कहिल्यै अन्त्य नहुने लडाई मा फाल्नु भएन (गलाती २:१2,16)। बरु, उहाँले हामीलाई विश्वासको तीर्थयात्रामा लैजानुहुन्छ जसमा हामीले बन्धन र पीडाका साङ्लाहरू हटाउन सिक्छौं जसबाट हामी पहिले नै छुटकारा पाइसकेका छौं (रोमी ६:५-७)। हामी पूर्णता को लागी एक Sisyphean संघर्ष को लागी निन्दा गर्दैनौं कि हामी जित्न सक्दैनौं; बरु, हामीले नयाँ जीवनको अनुग्रह प्राप्त गर्छौं जसमा पवित्र आत्माले हामीलाई धार्मिकतामा सृष्टि गरिएको र परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकेको नयाँ मानिसको आनन्द लिन सिकाउनुहुन्छ (एफिसी ४:२४; कलस्सी ३:२-३)। ख्रीष्टले पहिले नै सबैभन्दा गाह्रो काम गर्नुभएको छ - हाम्रो लागी मर्नु; उहाँ कती सजीलो काम गर्नुहुन्छ - हामीलाई घर ल्याउन (रोमी ५: -6,5-१०)?
विश्वास, हामीलाई हिब्रू ११: १ मा भनिएको छ, हामी, ख्रीष्ट द्वारा माया गर्नेहरु, के आशा मा हाम्रो दृढ विश्वास छ। विश्वास वर्तमानमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको असलको मात्र मूर्त, वास्तविक रूप हो - हाम्रो पाँच इन्द्रियहरूबाट लुकेको राम्रो। अन्य शब्दहरुमा, विश्वास को आँखा संग हामी देख्दछौं कि यो पहिले नै त्यहाँ थियो, अद्भुत नयाँ संसार जहाँ आवाजहरु मैत्री छन्, हातहरु कोमल छन्, जहाँ खाने को लागी धेरै छ र कोहि बाहिरी छैन। वर्तमान दुष्ट संसारमा हामीसँग कुनै ठोस, भौतिक प्रमाण नभएको कुरा हामी देख्छौं। पवित्र आत्माद्वारा उत्पन्न भएको विश्वास, जसले हामीमा सबै सृष्टिको मुक्ति र उद्धारको आशा जगाउँछ (रोमी ८:२३२५), परमेश्वरको उपहार हो (एफिसी २:८-९), र उहाँमा हामी उहाँको शान्तिमा ओछ्यानमा परेका छौं। , उसको शान्त र उसको आनन्द उसको प्रेमको अगम्य निश्चितता मार्फत।
के तपाइँ विश्वास को छलांग लिनुभयो? पेट अल्सर र उच्च रक्तचाप को एक संस्कृति मा, पवित्र आत्मा हामीलाई येशू ख्रीष्ट को काखमा शान्ति र शान्ति को बाटो मा आग्रह गर्दछ। अझ धेरै: गरीबी र रोग, भोक, क्रूर अन्याय र युद्धले भरिएको एउटा भयानक संसारमा, भगवानले हामीलाई (र हामीलाई सक्षम पार्नुहुन्छ) हाम्रो विश्वासको नजरलाई उहाँको वचनको प्रकाशमा निर्देशित गर्न, जसले दुखको अन्त्य, आँसुको अन्त्य ल्याउँछ, अत्याचार र मृत्यु र नयाँ संसारको सृष्टि जसमा धार्मिकता घरमा छ भन्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ (२ पत्रुस ३:१३)।
“मलाई विश्वास गर्नुहोस्,” येशू बताउनुहुन्छ। "तपाई जे देख्नुहुन्छ, जे पनि भए पनि, म सबै नयाँ बनाउँछु - तपाई सहित। चिन्ता गर्न छोड्नुहोस् र ममाथि भरोसा राख्नुहोस् जुन मैले तपाईंको लागि, तपाईंको प्रियजनहरूका लागि र सम्पूर्ण संसारको लागि घोषणा गरेको ठ्याक्कै हुनथ्यो। अब चिन्ता नलिनुहोस् र यस कुरामा निर्भर हुनुहोस् कि मैले तपाईंको लागि, तपाईंको प्रियजनहरूको र सारा संसारको लागि जे भनेको छु उही नै गर्नेछु। »
हामी उसलाई विश्वास गर्न सक्छौं। हामी आफ्नो काँधमा बोक्न सक्छौं - हाम्रो पाप, हाम्रो डर, डर, हाम्रो पीडा, निराशा, भ्रम र शंका को बोझ। हामीलाई उनीहरुका बारे थाहा हुनु अघि उसले तिनीहरुलाई बोक्दछ जसरी गरी ऊ बोक्दछ।
जे माइकल Feazel द्वारा